Voalohany, tsidiho ny fivarotanay Joopzy
Misafidiana vokatra tianao, avy eo kitiho ny “Atao anaty harona"Ary"Zahao hoe".
Dia fenoy ny fampahalalana anao ary aloa karama.
Dia izay! Mora be.
Ahoana ny fandefasana anao?
Mandefa baiko am-pitan-dranomasina izahay amin'ny alàlan'ny serivisy mailaka.
Rehefa vita ny fikirakirana ny kaomandinao dia halefanay any amin'ny orinasan-tseranana ary izy ireo no hitantana azy tanteraka. Aorian'ny fahatongavanao any amin'ny firenenao dia hitantana izany ny serivisy amin'ny paositra any amin'ny firenenao. Noho izany azafady mba mifandraisa amin'ireto lahatsoratrao eo an-toerana ireto rehefa tonga any amin'ny firenenao.
Inona no fomba fandoavam-bola ekena ao amin'ny Joopzy?
Manaiky Paypal, carte de crédit / credit, ary ny vola crypto izahay.
Mandefa eran'izao tontolo izao izahay, ary matetika ny fotoana fandefasana anay dia ao anatiny 7-10 andro fandraharahana tany Etazonia, ary 12-1Andro fiasarana 5 any amin'ny firenena hafa. Na izany aza, dia mety hitranga 20 andro fiasana ho tonga, miankina amin'ny toerana misy anao sy ny faharetan'ny famakiana ny fadintseranana.
Inona ny politika iverenanao?
Hamerina anao izahay ao anatin'ireny toe-javatra ireny:
* Raha simba ny entana
* Raha tsy tonga ao ny baiko 45 miasa andro
* Ny zavatra diso nandefasana azy
Nanafatra entana marobe aho fa tsy tonga daholo
Amin'ny ankapobeny dia mandefa entana marobe ao anaty fonosana misaraka isika mba hialana amin'ny fahatarana ny fomba fanao. Midika izany fa afaka tonga tamin'ny fotoana misaraka izy ireo.
Ny adiresy mailaka Joopzy?
Raha manana fanontaniana ianao, olana miaraka amin'ny baiko, sns., Tifiro haingana izahay!